Soosaarayaasha Alaabta Cuntada - Shiinaha Alaabada Alaab-qeybiyeyaasha & Warshadda
Alaabta Ilkaha Qaniinyada Molar Ilkaha Nadiifinta Alaabta Eyga
Astaamaha Sharaxaad Eyda si dabiici ah u jecel inay u ciyaaraan una ruugaan, dhibaatooyinkooda dabeecadeed way sii kordhayaan haddii aysan haysan qaabab sax ah oo ay ku raacaan dareenkooda.Ciyaar ahaan kuwan carruurtu ku ciyaaraan eeydu waa waxyaabaha ugu fiican ee lagu qanci karo dareenkooda cunaha. Maxaad u dooraneysaa lafahan cinjirka ah? Qalabkan ilkaha waxaa lagu soo saaray dhakhaatiirta xoolaha iyo injineerada wax soo saarka.Waxay ku samaysan yihiin teknoolojiyadda wax lagu beero ee bi-irbadda ah si loo hubiyo cimri dhererkooda. Iyada oo leh qaab laf iyo midab dhalaalaya, waxay si fudud u soo jiidan kartaa attenti eey ...
TPR Puppy Chew Toys Qalabka Eeyaha Yar Yar Ilmaha Nadiifinta Nadiifinta
Astaamaha sharraxa 1. Xidhmada qiimaha weyn ee toy-ga eey u ilko-baxayaan eeyahaaga, eeyo-ciyaalka eey-ciyaalka ah eey ku ciyaaraan waxay ka caawinayaan eygaaga inuu xalliyo caajiska, yareeyo buuqa iyo yareynta dhacdooyinka dabeecadda wax halaagga ah, la soco eeygaaga xayawaanka ah, waxyaabaha ey ku ciyaaraan eey is-dhexgalka ah ayaa adiga iyo adiga kor u qaadi doona xiriirka eyda. 2.Kuwaas eey ku ciyaaraan waxay ka samaysan yihiin wax aan sun ahayn, caag jilicsan iyo dabeecad cudbi dhaq ah, mid kasta oo ka mid ah eeygu calaliyo eeyaha yar yar ee dhexdhexaadka ah ayaa amaan u ah eeygaaga inuu calaliyo ama ciyaaro! Alaabada carruurtu ku ciyaaraan eeyaha yaryar ee ha ...
Ey Cunto Toy Elepant Plush Squeaky Cartoon Kartoonada Carruurta
Tilmaamaha Tilmaamaha Qiimaha Xirmooyinka 2 eey eey eey ku ciyaaraan eey: oo ay ku jiraan Daanyeer iyo Maroodiga eeyaha yaryar, dhexdhexaadka iyo kuwa waaweyn. Qalabyadan carruurtu ku ciyaaraan eeyaha ayaa ka samaysan suuf jilicsan, oo aan sun lahayn iyo wax badan, oo aad ugu habboon ilkaha iyo nadiifinta ilkaha. Intaas waxaa sii dheer, maahan wax qatar ah. Alaabtan xayawaanka ah ee xayawaannada leh ee qoob-ka-ciyaarka ah waxay ku habboon yihiin kicinta xiisaha eeygaaga oo eyda si fudud ugu raaxeysta nooca ciyaar tayo leh oo hagaajineysa xiriirka aad la leedahay asxaabtaada xayawaanka ah. Tilmaamaha Midabka: Daanyeer Maroon + ...
Squeaky Plush Dog Chew Toy Puppy Toys Qalabka firfircoon ee Squeaker
Tilmaamaha Tilmaamaha Naqshadeynta qaabka qurxoon, sunta lahayn iyo u adkaysiga qaniinyada, Waxay leedahay dhawaq xiiq ah oo ku raaxeysan kara eeyahaaga kuna kobcin kara nolosha eeyooyinkaaga. Shaygaani wuxuu ka samaysan yahay dhar tayo sare leh oo cudbi ah oo cudbi ah oo cudbi ah.Waxay u roon tahay eeyahaaga inay wax cunaan oo ay ka caawiyaan ilkahooda iyo ciridkoodaba inay si caafimaad qaba u koraan. Waa jilicsan tahay laakiin sidoo kale waa adag tahay oo waaraysaa. Faahfaahinta Midabka: Casaan + Buluug + Waxyaabaha Jaalaha ah: Dareer + Cabbirka Cotton: 13cm * 13cm Culayska alaabada: 120g / 0.26lb ...
Cake Plush Cuno Eeyaha Toy Soft Dog Squeaky Toys
Noocyada sharraxaadda Naqshad & naqshad keeg ah oo qurux badan, Kuwani caruusadaha lagu ciyaaro ayaa ujeeddadooda loo sameeyay si ay u siiyaan eeyo yar yar oo ku filan, ka caawiyaan yaraynta dabeecadda baabi'inta eeyaha, sida fadhiga fadhiga, kabaha iyo wixii la mid ah. Qeexitaannada Midabka: Jaalaha + Waxyaabaha Caddaanka ah: Midab + Cabbirka cudbiga: 14cm * 12cm * 5cm Miisaanka wax soo saarka: 150g / 0.33lb 1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonnaa inaan cusbooneysiinno badeecadeena si xilliyeed ah si aan u sii wadno feejignaanta horumarka ugu dambeeyay ee la xiriira eeyaha oo bixi ...
3 Xidhmo Dabeecadaha Cunnooyinka Cunnada ee Ciyaalka Dog Toy
Astaamaha Sharaxaad Waxay yihiin saaxiibbada eyda ugu fiican ee qaylada badan, waxay ku qancin karaan eeygaaga rabitaankiisa dabiiciga ah ee ah inuu wax cuno, sii daayo welwelka, ka caawiyo ilkihiisa iyo ciridkiisuba inay si caafimaad qaba u koraan oo sidoo kale xoojiyaan dareenka qoyska. Kaliya adoo riixaya oo tuuraya, sameecadaha la galiyay ee toy kasta waxay kicin karaan xiisaha eeyaha waxayna ka fogaan karaan caajisnimada. 3 Xirmo eey eyda caruusadda oo ay ku jiraan dawaco, Dabagaale iyo Raccoon. Noocyada sooca ah Midab: Dawacada / Dabagalka / Raccoon Waxyaabaha: Plush + Cabbirka Cotton: 15cm ...
Noocyo Kala Duwan Oo Xayawaan Ah Oo Sii Daaya Oo Sigaag Dog Toy Ah
Tilmaamaha Tilmaamaha Naqshadeynta iyo muuqaalka xayawaanka ee xayawaanka ah, waxay ku qanacsan tahay dareenka ugaarsiga dabiiciga ah ee xayawaanka, oo ku mashquulsan sidii looga hortagi lahaa waxyeelada alaabta guriga. Way fiicantahay in laga caawiyo ilkahiisa iyo ciridkaba inay caafimaad ahaan u koraan. Waxay kakooban tahay 4 noocyo kala duwan oo ah qaylo-dhaan iyo alaab-tooy ah oo lacag la'aan ah, qaabab kala duwan oo loogu talagalay calalinta xayawaanka, ciyaar iyo tababar saacado ah. Waxaa lagu heli karaa 4 astaamo qosol leh: Daanyeer, Maroodi, Eey, iyo Doofaar. Alaabada lagu ciyaaro ee dhejiska leh waxay ka kooban tahay barkinta hawada, waxay abuurtaa dhawaaq qaylo leh markii la riixayo. Gaar ah ...